Holtop eguzobewo azụmahịa mmekọrịta isi mba Asia, Europe na North America, na akwụ a n'ụwa nile aha nke na-enye pụrụ ịdabere na na ngwaahịa, ihere ngwa nka na anabata support na ọrụ.
Holtop ga-agba mbọ iji ozi ọ na-anapụta ukwuu oru oma na ume ịzọpụta ngwaahịa na ngwọta iji belata gburugburu ebe obibi mmetọ, iji hụ na ndị mmadụ ike ma na-echebe anyị n'ụwa.
bụ ndị na-eduga emeputa ke China ọkachamara na mmepụta nke ikuku ikuku okpomọkụ mgbake equipments. Tọrọ ntọala na 2002, ọ raara nye nnyocha na technology development na ubi nke okpomọkụ mgbake ventilashion na ume na-azọpụta ikuku njikwa equipments n'ihi na ihe karịrị 16 afọ.
Site afọ ọhụrụ na mmepe, Holtop pụrụ inye a na nso nke na ngwaahịa, ruo 20 usoro na 200 nkọwa. The ngwaahịa nso tumadi na-ekpuchi: Okpomọkụ Recovery Ventilators, Energy Recovery Ventilators, Fresh Air filtration Systems, Rotary Okpomọkụ Exchangers (Okpomọkụ Wheels na Enthalpy wheel), efere Okpomọkụ Exchangers, Air njikwa Units, wdg
Holtop obi sie elu àgwà ngwaahịa na ọrụ R & D otu, mbụ na klas mmepụta ụlọ ọrụ na elu management usoro. Holtop nwere onuogugu akara igwe, mba mma enthalpy labs, na ọma gafere certifications nke ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, OA na EUROVENT. E wezụga, Holtop mmepụta isi e mma na ntụpọ site TUV Sud.
Holtop nwere 400 ọrụ na-ekpuchi ebe ndị ihe karịrị 30,000 square mita. Kwa Afọ mmepụta ike nke okpomọkụ mgbake ngwá esịmde 100,000 tent. Holtop ọnọde OEM ngwaahịa maka Midea, LG, Hitachi, McQuay, York, Trane na ụgbọelu. Dị ka ihe ùgwù, Holtop bụ ruru eru soplaya maka Beijing Olympics 2008 na Shanghai World ịkọwa 2010.